Inye nwa - ee ma obu ee? Kedu ihe kacha mma maka nwa m?
Ịzụ nwa | nwa
Mmetụta nchebe mgbe ị na-enye nwa ara
Gini mere nne kwesiri iji nyere nwa ya aka?
Ekwesịrị m inye nwa m ara ara? Ajụjụ nke ọtụtụ nne na-atụ anya na-ajụ. Maka ụfọdụ ọ bụ ihe doro anya, ma ọ bụghị maka ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-eche ma ọ bụ ma na esi eme ya "nri" ma ọ bụ ihe ị ga-achọ mgbe ị na-enye nwa.
Ịgba ara ara - okwu nke mmetụta
Nwa nke mbụ na-enwekarị obi iru ala, ma ọ nwere ọtụtụ nne nwere ihe ịtụnanya ugboro ugboro mgbe nwa nke abụọ ma ọ bụ nke atọ na-egosi ọchịchọ na mmeghachi omume dị iche iche banyere ịba ara, dị ka ụmụnne ya ndị tọrọ ya.
Ekwesịrị m inye nwa m ara ara? Ozi na ntuziaka
Ịgba ara dị ka nkwurịta okwu na-adịghị na nne na nwa
Otú ọ dị, ahụmahụ nke ndị nne na ndị midwives na-egosi na nrụgide ma ọ bụ ọbụna usoro ime umuaka na-enweghị isi. Maka na n'otu aka enwere ihe omuma, ma n'aka nke aka nwa.
Ma nke ahụ ka na-ekwu n'okwu a. Mmasị ya, mkpa ya, mmetụta nke agụụ, ma ọchịchọ maka ịbịaru nso na nchebe ga-ekpebi usoro na oge nke ịme nwa na-ewe oge. A sị ka e kwuwe, obere nwa amaala ụwa bụ onye isi na-ekwu maka ịba ara.
Ọ bụrụ na mama na-atụkwasị nwa ya obi, na-etinye aka na ya, ma nwee ume, nke ahụ bụ ụzọ kasị mma isi merie nsogbu ndị mbụ. Nke a na-emetụtakwa ajụjụ banyere oge ole a ga-enye nwa ara. Ọzọ, ọ dịghị iwu, ọ dịghị achị. Ọ bụrụ na ọ na-amasị nne na nwa, nke ahụ dị mma.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka otu akụkụ daa, ihe ka ukwuu n'oge ahụ akụkụ nke ọzọ na-emeghachi omume na-eche na ọ bụ oge ịkwụsị. Mkparịta ụka n'etiti nne na nwa bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omimi na mmetụta, nke dị iche mgbe ị na-enye nwa ara.
Ọ bụrụ na a na-atụle nwa ara ara na akụkụ nke edozi ahụ, ọ na-anọgide na-emesi ike na ọ dịghị ihe ọ bụla na-agbanwe maka mmiri ara ara. Ngwakọta dị iche iche a gbanwere na ahia ahụ dabeere na ehi, soy ma ọ bụ mmiri ara ehi ma jiri mmiri ara ehi mee ihe ọ bụla o kwere mee. Ma, ha enweghị ụdị ihe a.
N'ihi na naanị ndị a nwere ihe ndị dị mkpa na-adịghịzi mkpa nke obere onye chọrọ, karịsịa na ọkara nke ọkara n'afọ maka nchebe ya. Ndị a na-agụnyekarị na colostrum, nke a na-akpọ mịkọlị, bụ nke a na-ebute n'ụbọchị mbụ mgbe amuchara nwa. Mgbe ahụ, ọ na-abịa na e guzobere mmiri ara ehi ara.
Nke a bụ ihe mejupụtara ọzọ ihe dị iche. Na ụzọ site na mmanụ aṅụ na mmiri ara nne, protein na-ebelata, abụba na carbohydrate na-abawanye. Ọnụ ọgụgụ nke emepụtara na-adabere na nchọta - nkwụnye ego, ọ bụ ezie na ọchịchọ ahụ nwere ike ịdị iche. Naanị mmiri ara ehi mmadụ na-adabere kpọmkwem na mkpa nke nwa ahụ. Mmiri ara ehi nwere protein buru ibu maka nwa ma ọ bụ nnukwu protein mole, nke nwere ike imebi akụrụ. Ya mere, a gaghị enye mmiri ara ehi n'afọ mbụ nke ndụ. Ngwurugwu carbohydrate na abụba, n'aka nke ọzọ, dị oke ala.
Otú ọ dị, na mgbakwunye na ajụjụ na-edozi ahụ, inye nwa na-arụ ọrụ ọzọ dị mkpa: mmekọrịta dị n'etiti nne na nwa. Karịsịa na mbido, mgbe ị ga-ebu ụzọ "mara onye ọ bụla ọzọ," ọ bụrụ na nwa ahụ ga-achọ ụzọ ya na-enweghị nchebe na-ekpo ọkụ site na Mama m n'afọ ọhụrụ ya ma nweekwa nchebe dị ukwuu. Naanị mgbe ọ na-enye nwa ara na-enyere aka ịkwalite akụkụ ndị a.
Ịgba nwa na-enye nwa nchebe
Mmekọ anya, mmekọrịta ịhụnanya n'etiti nne na nwa, nke a na-eme n'oge ị na-ara ara, na-esikwa ike iji dochie ihe ọ bụla ọzọ. Ihe dị mkpa ebe a bụ ebe gburugburu udo, obi ụtọ na nkasi obi dị.
Enweghị TV ma ọ bụ redio kwesịrị ịgafe n'ụzọ, ekwesịrị ịkwụsị ekwentị ma rụọ ọrụ ụlọ n'ụlọ ọrụ izu ụka ma ọ bụrụ na o kwere mee. N'ebe a, ha abụọ nwere ike ịnụ ụtọ mmekọrịta gị na ibe ha.
N'ezie, ịmụ nwa nwekwara akụkụ dị irè. Ọ bụ mgbe nile na ebe nile nri ziri ezi, na nghazi na okpomọkụ kwesịrị ekwesị, nke a kwadebeghị ma ọ bụ na-enweghị ihe ọ bụla. Enweghị njem nke karama, ọkụ ọkụ ọkụ na ngwa ndị ọzọ dị mkpa. Nke a na-enyekwa nne ya ohere mgbanwe na mgbalị nhazi.
N'ihe niile, o meela amamihe nke okike ka nwa na-aṅụ ara bụrụ mmalite mmalite kachasị mma maka nwa obere mmadụ. Nri, na mmetụta uche. N'ezie, e nwere ndị inyom na-enweghị ike ma ọ bụ na-achọghị ka ara ara. Nke a dịkwa mma, n'ihi na ọ dịghị onye a ga-amanye gị ka ị ghara inwe mmetụta. Nke ahụ agaghị adị mma n'akụkụ abụọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na enwere ọchịchọ ma nwee ike ịmị ara, ọ ga-eme ka nke a bụrụ ihe ngwọta ọ bụla.
Ọtụtụ ndị nne na-atụ anya na-eche ma hà ga-ara ara ma ọ bụ na ha ekwesịghị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị dọkịta ga-enye ha doro anya ee.
M kwesiri ime nwa m?
A na-atụ aro ka a na-enye nwa ara maka ọtụtụ ndị nne ọhụrụ. Ruo mgbe 1867 site Henri Nestle nri nwa bụ nke ndị Nestle Company, ara bụ naanị viable nhọrọ maka nri nke ụmụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na nne enweghị ike ịzụ nwa ya, a hụrụ otu nọọsụ na ọ ga-azụ nwa ahụ maka nne ahụ.
The mmeghe nke nri nwa bụ welcome n'ihi na ọ pụtara na e nwere a bara uru ekwukwa n'akwụkwọ ọzọ maka ụmụ ọhụrụ nne na-enweghị ike breastfeed ha.
Ma, ebe ọ bụla a na-enye nwa ara ara, ọ na-esite n'èzí na-enye nwa ara na nri nwa ka ọ bụrụ ụzọ kacha mma maka ịzụ ụmụaka. Olee otú nke ahụ si mee?
Ụfọdụ ndị na-eche na ọ bụ mgbasa ozi ahịa dị irè site n'aka ndị na-ere nri ụmụaka. Ndị ọzọ kwenyere na ọ bụ ihe si na nne na-arịwanye elu nke ndị nne na-arụ ọrụ, na-eme ka o sie ike ịmị nwa.
N'ụzọ dị mma, ihe a na-eme taa bụ maka ndị nne na-azụ ụmụ ha, ọ bụrụgodị na ọ bụ naanị ọnwa ole na ole. A kwadoro inye nwa nwa mgbe m mụrụ nwa mbụ, a kọwaara m uru ndị ahụ, ma a ka nwere ọtụtụ nkwenye ma ọ bụrụ na nne kwadoro ara na-elekọta ụmụ mmadụ. O yiri ka ọ dị mma ka nne na-ara ara na ebe nzuzo ebe ọ na-adịghị onye ọzọ pụrụ ịhụ ya. Nanị ụzọ ọ ga-esi kwe omume bụ ka nne nọọsụ nọrọ n'ụlọ n'oge niile ma ghara ịga n'ihu ọha, nke mara mma.
Mama m bụ otu n'ime ndị na-enweghị obi ụtọ na m kpebiri na-ara ara. Ihe mere na ọ masịghị ya bụ na ọ kpọrọ ya asị mgbe m na-azụ nwa m n'ebe ọzọ karịa na ụlọ m n'enweghị onye ọzọ. Otú ọ dị, ana m eleghara nkwenye na enweghị m obi ụtọ na m mere. My nwa enweghị nsogbu na allergies na-ama m ikpe m niile ndụ (m bụ nwa ọhụrụ na-breastfed), na m na-eche na ara nyeere iji chebe ya. Nnyocha e mere egosiwo na nchedo na iguzogide allergies bụ otu n'ime ọtụtụ uru dị n'ịmụ nwa.
Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị na-aṅụ ara ma ọ dịkarịa ala ọnwa isii (ịzụ nwa dị mma maka otu afọ), nanị ọnwa ole na ole nke ịzụ nwa pụrụ iwetara nne na nwa ahụ uru dị ukwuu. Nke mbụ, ọ bụ nri zuru okè maka nwa ọhụrụ, n'ihi na okike mere ya n'ụzọ ahụ. Nke a pụtara na nwa nwere obere nsogbu na mmiri ara ara karịa na nri ụmụaka.
Kedu uru nke ịzụ nwa maka nne?
Ọ dị ọnụ ala karịa nri nwa. Inye nwa ara nwekwara ike inyere nne ọhụrụ aka ịhapụ ime pound dị ka nne nke ahụ na-eme ka mmiri ara ara na-erekwu calorie. Nne ara na-enyekwa aka na akpanwa na-alaghachi ngwa ngwa karịa ngwa ngwa, ebe ọ bụ na a na-ewepụta ọbara ọbara na ọbara mgbe nne na-enye nwa ara.
Kedu ụfọdụ n'ime uru nke ịzụ nwa maka nwa?
Nwa na-emetụtaghị mmiri ara ara karịa nri nwa. Tụkwasị na nke a, colostrum, nke na-enye nwa nje na nje na nje bacteria, nọ na mmiri ara ehi ruo ọtụtụ ụbọchị mgbe amuchara nwa ahụ. Nnyocha egosiwo na ụmụ ọhụrụ ara na-erughị ka ha ga-arịa ọrịa karịa ụmụaka, obere ọrịa (dị ka ntị nke nje na-efe efe) ma bụrụ ndị na-adighi adọrọ mmasị na nje. Nke a bụ n'ihi na mmiri ara ara nwere ọgwụ nje na-echebe ụmụ ọhụrụ site na ọrịa na ọrịa.
Elu-edu na mfe iji ara nfuli eme ka ọ dịrị nne imipu ara ruo ụmụ ọhụrụ ha na ụlọ ahịa na mgbe ha na-esi n'ebe obibi - a oké ihe maka ndị nne ndị na-aga azụ na-arụ ọrụ, ma ka chọrọ inye nwa ya na mmiri ara.
Iyi agba na nwa na-enye nwa
Ịnye ara - Gụnye Nna
Sunscreen for Baby & Toddler | Health ...
Ịṅụ sịga na ime Ahụike & Nwa
Nwa na-elekọta nwa na ezé
Nlekọta nwa - ilekọta ntutu isi nwa
Nwa na - elekọta nwa
Nlekọta nwa - ihu nwa
Bibie pacifier | Nwa nwa
Agba agba na-amụ nwa
Na-agbanwe nne nne na nna na nwa
Ụmụ agbọghọ na-agba agba na nwa
Na-agbanwe nne na nne nwa
Ị na-agba agba akwa na nwa